စကတ် တိုလေးနဲ့ ပို့စ်ပေး ကြမ်းပြီး သီချင်းလေး အတိုင်း အမိုက်စားလေး ရိုက်ပြထားတဲ့ ဖူးပွင့်သခင် ရဲ့ ဂေါ်ထွက် နေတဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Shwe Ba
Homepage / Cele News / စကတ် တိုလေးနဲ့ ပို့စ်ပေး ကြမ်းပြီး သီချင်းလေး အတိုင်း အမိုက်စားလေး ရိုက်ပြထားတဲ့ ဖူးပွင့်သခင် ရဲ့ ဂေါ်ထွက် နေတဲ့ ဗီဒီယိုလေး
စကတ် တိုလေးနဲ့ ပို့စ်ပေး ကြမ်းပြီး သီချင်းလေး အတိုင်း အမိုက်စားလေး ရိုက်ပြထားတဲ့ ဖူးပွင့်သခင် ရဲ့ ဂေါ်ထွက် နေတဲ့ ဗီဒီယိုလေး
မင်း သမီး ချောလေး ဖူးပွင့်သခင် က တော့ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ အပြုံးလေး တွေနဲ့ တစ်မူ ထူးခြားစွာ ဖမ်းစား နိုင်စွမ်း ရှိသူ လေး ဖြစ် ပါ တယ် ။ ချောမောတဲ့ မျက်နှာလေး အ ပြင် သွယ်လျ လှပတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေး ကိုပါ ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ဖူးပွင့်သခင် က ယောက်ျားလေး ပရိသတ် တွေရဲ့စိတ်ဝင် တစားအားပေး မှုကို ရရှိနေတာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် ။ ဒါ့ အပြင် ဖူးပွင့်သခင် က အနုပညာ အလုပ် တွေကို ကြိုးစား ပမ်းစား လုပ်ကိုင်တတ် တာကြောင့် အရမ်း ကို အောင်မြင် နေတာပဲ ဖြစ် ပါတယ် … .
ဖူးပွင့်သခင် က ကြော် ငြာ လေးတွေနဲ့ Photo Shooting တွေ ရိုက်ကူး နေရသလို အပျော် တမ်း Tik Tok ဗီဒီယိုလေး တွေကို လည်း ဖန်တီးတတ် တာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဖူးပွင့်သခင် က သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး တွေကို အမြဲ မျှ ဝေပေး တတ် တာဖြစ် ပြီး ပရိသတ်တွေ ကလည်း နှစ်ခြိုက် အားပေးကြ တာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ အခု လည်း ဖူးပွင့်သခင် က အပြင် ထွက် ရင်း အပျင်း ပြေ ရိုက်ကူး ထားတဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေနဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို ထုတ်ပြ လိုက် တာ ဖြစ်ပါ တယ် ။
စ ကတ် တိုတိုလေး နဲ့ အပြတ် လန်းနေတဲ့ ဖူးပွင့်သခင် က ဆွဲဆောင် မှု ရှိတဲ့ အလှတရား တွေ ပေါ်လွင် နေတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဒါ့အ ပြင် ဖူးပွင့်သခင် က ကိုယ်လုံးလေး ကို တစ်ပတ် လှည့်ပြီး Tik Tok ကစားပြထားတဲ့ ပုံစံလေး ကလည်း ကြည့်ရှုသူ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေ ကိုမြန်စေ လောက်တာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပရိသတ် တွေ အတွက် မင်းသမီး ချောလေး ဖူးပွင့်သခင် ရဲ့ဗီဒီယိုလေး ကို ပြန်လည် မျှ ဝေ ပေး လိုက်ပါ တယ်နော် … .
source & video credit : Phoo Pwint Thakhin ’ s Tik Tok acc
မင္း သမီး ေခ်ာေလး ဖူးပြင့္သခင္ က ေတာ့ ခ်စ္စရာ ေကာင္းတဲ့ အျပဳံးေလး ေတြနဲ႔ တစ္မူ ထူးျခားစြာ ဖမ္းစား နိုင္စြမ္း ရွိသူ ေလး ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ေခ်ာေမာတဲ့ မ်က္ႏွာေလး အ ျပင္ သြယ္လ် လွပတဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ေလး ကိုပါ ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ဖူးပြင့္သခင္ က ေယာက္်ားေလး ပရိသတ္ ေတြရဲ့စိတ္ဝင္ တစားအားေပး မႈကို ရရွိေနတာ လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ဒါ့ အျပင္ ဖူးပြင့္သခင္ က အႏုပညာ အလုပ္ ေတြကို ႀကိဳးစား ပမ္းစား လုပ္ကိုင္တတ္ တာေၾကာင့္ အရမ္း ကို ေအာင္ျမင္ ေနတာပဲ ျဖစ္ ပါတယ္ … .
ဖူးပြင့္သခင္ က ေၾကာ္ ျငာ ေလးေတြနဲ႔ Photo Shooting ေတြ ရိုက္ကူး ေနရသလို အေပ်ာ္ တမ္း Tik Tok ဗီဒီယိုေလး ေတြကို လည္း ဖန္တီးတတ္ တာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ဖူးပြင့္သခင္ က သူမ ရဲ့ အမိုက္စား ဗီဒီယိုေလး ေတြကို အျမဲ မၽွ ေဝေပး တတ္ တာျဖစ္ ၿပီး ပရိသတ္ေတြ ကလည္း ႏွစ္ၿခိဳက္ အားေပးၾက တာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ အခု လည္း ဖူးပြင့္သခင္ က အျပင္ ထြက္ ရင္း အပ်င္း ေၿပ ရိုက္ကူး ထားတဲ့ ပုံရိပ္ေလး ေတြနဲ႔ ဗီဒီယိုေလး ကို ထုတ္ၿပ လိုက္ တာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။
စ ကတ္ တိုတိုေလး နဲ႔ အျပတ္ လန္းေနတဲ့ ဖူးပြင့္သခင္ က ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိတဲ့ အလွတရား ေတြ ေပၚလြင္ ေနတာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ဒါ့အ ျပင္ ဖူးပြင့္သခင္ က ကိုယ္လုံးေလး ကို တစ္ပတ္ လွည့္ၿပီး Tik Tok ကစားျပထားတဲ့ ပုံစံေလး ကလည္း ၾကည့္ရႈသူ ပရိသတ္ေတြရဲ့ ရင္ခုန္သံေတြ ကိုျမန္ေစ ေလာက္တာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ မင္းသမီး ေခ်ာေလး ဖူးပြင့္သခင္ ရဲ့ဗီဒီယိုေလး ကို ျပန္လည္ မၽွ ေဝ ေပး လိုက္ပါ တယ္ေနာ္ … .
Previous post အသဲယားစရာ ပုံစံလေးနဲ့ အမျိုးမျိုးလုပ်ပြပြီး ပုရိသတွေကို ညှို့ယူစွဲဆောင်လိုက်တဲ့ မင်းသမီးလေးခန့်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
Next post ကြည့်ရှု သူတိုင်း ရင်ခုန်သံတွေ ဗြောင်းဆန် သွားစေမယ့် မမဆောင်း ရဲ့ အသဲယား စရာ ဗီဒီယိုလေး